Smartwatch - Qalabka Gadget | Wararka Gadget (Bogga 2)
Huawei Watch GT 2: Nooca casriga ah ee casriga ah ayaa rasmi ah
Ka raadi wax walba oo ku saabsan Huawei Watch GT 2, smartwatch-ka cusub ee astaanta ee horeyba loogu soo bandhigay munaasabad ka dhacday Jarmalka.
Marka lagu daro iPhone 11, tani waa wax walba oo Apple ay ku soo bandhigtay muxaadaradii ugu dambeysay
Marka lagu daro iPhone 11, ragga ka socda Cupertino waxay sidoo kale soo bandhigeen cusbooneysiinta muddada dheer la sugayay ee iPad 2018 iyo Apple Watch Series 4. Waxaan ku tuseynaa dhammaan wararka ay na siinayaan.
Soo hel noocyada cusub ee smartwatch-ka ah ee Wear OS oo Fosil ay si rasmi ah ugu soo bandhigtay IFA 2019 toddobaadkan magaalada Berlin.
Puma Smartwatch: Smartwatch ee sumadda leh Wear OS
Puma Smartwatch: Smartwatch ee sumadda leh Wear OS. Ka ogow wax intaa ka badan oo ku saabsan daahfurka saacaddan IFA 2019.
Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition: The New Watch Edition
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition, nooca gaarka ah ee saacadda Samsung oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Galaxy Watch Firfircoon 2: Smartwatch-ka cusub ee Samsung
Raadi wax walba oo ku saabsan Galaxy Watch Active 2, saacadda cusub ee Samsung, oo horeyba si rasmi ah loo soo bandhigay isla markaana dhowaan iman doonta.
Fosil waxay soo bandhigeysaa jiilkeeda cusub ee saacadaha leh Wear OS
Raadi wax intaa ka badan oo ku saabsan noocyada cusub ee saacadaha Fosil ee u adeegsada Wear OS nidaamka qalliinka oo horeyba si rasmi ah loogu soo bandhigay.
Tani waa saacadda casriga ah ee Samsung Galaxy Watch Active
Soo ogow qeexitaanka buuxa ee Samsung Galaxy Watch Active, smartwatch-ka cusub ee sumadda Kuuriya si rasmi ah loo soo bandhigay.
Lix fiidiyow oo gaagaaban oo Apple Watch ah iyo dhowr shaqooyinkiisa ah
Waa maxay smartwatch
Haddii aadan wali cadeyn waxa iyo waxa smartwatch loogu talagalay, qodobkaan waxaan ku sharixi doonaa wax walboo la xiriira aaladahaan.
Taxanaha Apple Watch 4 waa durbaba rasmi ah: Ogow dhammaan wararkooda
Taxanaha Apple Watch 4: Tilmaamaha, qiimaha iyo soosaarida rasmiga ah. Raadi dhammaan wixii ku saabsan jiilka cusub ee saacadaha Apple.
Galaxy Gear S4 ama Galaxy Watch ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Ogosto
Wax walba horey ayaa loo qorsheeyay waxayna umuuqataa in saacadaha casriga ah ee shirkadda Kuuriyada Koofureed ee arki doona iftiinka ...
"Xidho siddooyinkaga" waa ololaha xayeysiiska ee Apple Watch
Mar labaad waxaan haynaa seddex ogeysiis oo Apple ah oo laxiriira dhaqdhaqaaqa jirka iyo xirida giraanyada maalin kasta ...
Tani waa sida smartwatch-ka cusub ee Emporio Armani u eg yahay
Shirkadda Armani ayaa had iyo jeer lala xiriirin jiray moodada, laakiin xilliyadii ugu dambeeyay, iyo kororka smartwatches awgeed, shirkaddu waxay rabtay inay gasho shirkadda moodada Armani, waxay soo bandhigtay jiil cusub oo smartwatch ah oo loogu talagalay dadka jecel shirkadda iyo isboortiga ee guud.
Heshiisyada ugufiican maalinta Amazon Prime Day 2018
Maanta waa mid ka mid ah maalmaha la filayo sanadka, oo ay weheliso Black Friday, ugu yaraan macaamiisha ...
Samsung ayaa daaha ka rogi doonta Galaxy Note 9 iyo Gear S4 horaanta bisha Ogosto
Xanta ugu dambeysa ee ku saabsan suurtagalka taariikhda soo bandhigida ee Galaxy Note 9 waxay soo jeedineysaa inay noqon doonto horraanta Ogosto oo ay la imaan doonto Gear S4
Matrix PowerWatch X, smartwatch-kii ugu horreeyay ee la shaqeeya kuleylka jirkeena
PowerWatch X hadda waa iib, smartwatch-ka ugu horreeya ee suuqa ku jira ee isticmaala kuleylka jidhkeenna sida il tamar ah
daawashada 5: dhammaan wararka aad ugu raaxeysan karto dhowaan barta Apple Watch-kaaga
watchOS 5 waa cusbooneysiinta cusub ee Apple Watch ee gaari doonta dhammaan isticmaalayaasha bisha Sebtember ee soo socota. Waxaan si faahfaahsan u faahfaahinaynaa dhammaan wixii horumar ah ee lagu daray.
Markaa Xiaomi Mi Band 3 ma noqon doonaa?
Waqti dheer ayaa ka soo wareegay tan iyo markii la bilaabay shirkadda Xiami Mi Band 2, shirkadda Shiinaha ayaa waqti dheer u dhexaysay ...
Tani waxay noqon kartaa smartwatch-kii aad sugeysay inaad mid iibsato
Smartwatches ayaa yimid suuqa iyada oo ay ugu mahadcelinayaan shirkaddii dhacday ee Pebble, oo ah shirkad aan la qabsan karin ...
Fitbit Versa cusub ayaa hadda la iibinayaa
Dalkeenna, saacadda Fitbit Versa ayaa hadda loo heli karaa iibsi iyo sidoo kale inta ka hartay ...
Android Wear ayaa magaceeda u badali doonta Wear OS
Toddobaadyo gudahood, barnaamijka loo yaqaan 'Android Wear application', iyo sidoo kale magaca nidaamka qalliinka ee lagu maamulo tiro badan oo smartwatches ah, ayaa loo beddeli doonaa Wear OS.
Tani waa smartwatch-ka ugu qaalisan adduunka
Soosaaraha Swiss Tag Heuer ayaa ku soo bandhigay Tag Heuer Connected Full Diamond, oo ah nooc isku daraya 589 dheeman oo ku kala firirsan hareeraha taajka iyo suunka aaladda oo qiimihiisa uu ka baxsanayo in ka badan kala bar dadka.
JOOGO, saacadda qaybsan ayaa la iibinayaa sannado badan oo shaqo ah ka dib
Saacadaha qaabdhismeedka ah 'BLOCKS' ayaa la iibinayaa waxaana loo diri doonaa dadka isticmaala rubaca hore ee sanadka 2018. Qiimahiisa wuxuu ku bilaabmayaa 220 euro
Casio wuxuu ku biirayaa smartwatches, laakiin qaabkiisa
Casio waxay soo saartay daabacaad gaar ah noocyadeeda caanka ah ee G-Shock oo ay ku jiraan waxyaabo kale oo ah isku xirnaanta GPS iyo ismaamulka mahadsanid iftiinka qoraxda.
Waad ku mahadsantahay barnaamijka Samsung Copilot, waxaan iska ilaalin doonnaa inaan ku seexanno gaariga
Waad ku mahadsan tahay codsiga Samsung Copilot, fursadaha aan ku seexan karno giraangiraha ayaa yaraanaya haddii aan haysano smartwatch la jaan qaada
Baahida loo qabo smartwatches ayaa kordheysa in kabadan 100% xilliga Kirismaska
Waxay umuuqataa in taariikhaha aan bixinayno xaga iibinta aaladaha ...
Kuwani waa 'smartwatches' oo cusbooneysiin doona Android 8.0 Oreo
Google ayaa daabacday liiska smartwatches ku saleysan Android Wear oo heli doona cusbooneysiinta Android 8.0 Oreo. Waxaan kaa tageynaa liiska oo dhameystiran
Jarmalka ayaa mamnuucaya iibinta saacadda casriga ah ee loo sameeyay carruurta u dhexeysa 5 iyo 12 sano jir
Waana in tikniyoolajiyaddu had iyo jeer aysan ahayn xalka iyo sida lagu muujiyey munaasabado aan tiro lahayn waa lagama maarmaan ...
Dhibaatooyin cusub oo loogu talagalay Apple Watch Series 3
Mar labaad taxanaha Apple Watch 3 wuxuu dhibaatooyin siinayaa dadka isticmaala ee iibsaday. Markan dhibaatadu waxay saameysaa shaashadda.
Fosil waxay soo bandhigaysaa laba smartwatches cusub oo isku dhafan oo loogu talagalay dhagaystayaasha haweenka
Ragga ka socda Fosil waxay hadda sii ballaariyeen buugooda 'smartwatches hybrid', iyagoo soo bandhigaya laba nooc oo loogu talagalay haweenka.
Qeybta Android Wear ayaa ka baaba'aysa dukaanka Google
Wax yar ka dib soo bandhigida Pixel 2 cusub, shirkada ku taal Mountain View waxay ka saartay dhamaanba tixraacii smartwatches bakhaarkeeda
SPC waxay soo bandhigeysaa labo saacadood oo cusub qiimo jaban, Smartee Pop iyo Sport
Smartee Pop iyo Smartee Sport waa laba ikhtiyaar oo aad u xiiso badan oo leh astaamo wax ku ool ah, aan ku baranno waxoogaa si dhow.
Garmin Vivofit Jr 2 waa jijin lagu qiyaaso kuwa yaryar
Marna kama habsaamin, ama goor hore kiiskan. Maanta waxaan ka hadli doonnaa badeecad gaar ah oo ...
Apple wuxuu joojiyaa dhowr nooc oo Apple Watch ah oo xaqiijinaya imaatinka dhow ee Apple Watch Series 3
Apple waxay joojisay noocyada qaar ee Apple Watch, iyadoo xaqiijineysa in maanta aan arki karno Apple Watch Series 3 cusub.
Moodooyinka cusub ee Michael Kors smartwatch ayaa hadda laga heli karaa suuqa
Shirkadda raaxada leh ee Michael Kors ayaa dib u cusbooneysiisay saacado kala duwan oo casri ah, iyadoo soo saartay laba nooc oo cusub: Sofie iyo Grayson.
IPhone X kaligiis ma imaan doono oo Apple Watch Series 3 ayaa xaqiiqo noqon doonta berri
Soo daadashada koodhka iOS 11 ayaa noo ogolaaday inaan ogaano in iPhone X cusub uusan kaligiis imaan doonin, waxaana la socon doona Apple Watch Series 3.
Samsung Gear Sport-ka cusubi waa mid rasmi ah oo imika xambaarsan warar xiiso badan
Dhowr daqiiqo ka hor, Samsung waxay si rasmi ah ugu soo bandhigtay Sport-ka cusub ee 'Gear Sport' IFA 2017, oo ah mid smartwatch ah oo ay ka fikirayaan iyo ciyaartoydu.
Samsung Gear Sport-ka cusub waxaa lagu arki karaa boodhadh saacado ah ka hor inta aan si rasmi ah loogu soo bandhigin IFA 2017
Sport-ga cusub ee Gear Sport ayaa la arki karaa waqti ka hor, isagoo si rasmi ah u xaqiijinaya sida ay Samsung ugu heellan tahay smartwatches.
Sebtember 12 waxay noqon kartaa taariikhda ay Apple u dooratay inay soo bandhigto iPhone 8
Ragga ka socda Cupertino waxay soo bandhigi karaan iPhone 8 cusub September 12, sida laga soo xigtay websaydhka Faransiiska Mac4Ever.
Samsung Gear Fit2 Pro wuxuu noqon doonaa wehelka ugu fiican Samsung Galaxy Note 8
Samsung waxay horeyba shuraako ugu laheyd Samsung Galaxy Note 8 Ogosto 23: Samsung Gear Fit2 Pro, waa wearaheeda xiga
Naqshaddan, Fitbit waxay dooneysaa inay soo ceshato booska koowaad ee iibka ee suuqa la gashan karo
Fitbit's wearable soo socda, wuxuu tilmaamayaa inay awood u leedahay inay cabirto heerka oksijiinta ku jirta dhiiga, iyadoo ah smartwatch kii ugu horeeyay ee sidaas sameeya.
Garmin VivoActive 3, sawirradii ugu horreeyay ee 'this wearable' ayaa u muuqda
Wax soo saarka Garmin ee soo socda ee diiradda lagu saaray kormeerka dhaqdhaqaaqa ayaa la ogaaday. Kani waa Garmin VivoActive 3
Apple waxay bilaabi kartaa Apple Watch oo leh LTE
Apple waxay bilaabi kartaa Apple Watch madaxbanaan sanadkaan gudihiisa. Taasi waa, moodel aan u baahnayn iPhone inuu shaqeeyo
The Louis Vuitton smartwatch horeyba waa rasmi inkasta oo qiimaheeda uusan gaari karin qof walba
Louis Vuitton ayaa soo bandhigay smartwatch cusub oo ay ugu magac dartay Tambour Horizon kaas oo qiimihiisu noqon doono 2.450 euro.
Sony wuxuu bilaabayaa FES Watch U 2, oo ah qalab smartwatch aad loo hagaajin karo
Sony FES Watch U waa mid elektaroonik ah oo elektaroonig ah oo ku fidsan dhanka suunka oo bixinaya muuqaalka hal xabbad oo aad u fudud
Sida dib loogula noqdo Apple Watch goobaha wax soosaarka haddii aad ilowday furaha furaha
Cashar ku saabsan sida dib loogu celiyo Apple Watch ilaa goobaha wax soosaarka saacadda ama iPhone haddii aad ilowday furaha furaha.
Jiilka koowaad ee Huawei Watch ayaa loo cusbooneysiiyay Android Wear 2.0
In yar oo yar, nooca cusub ee nidaamka hawlgalka ee jiilka koowaad ee saacadaha Huawei Watch ayaa imanaya. Gudaha…
eBay, Google Maps, iyo Amazon hadda lagama heli karo Apple Watch
Waxaan ku jirnaa xilligaas adag barnaamijyada qaar oo aan ka helnay dharka la gashado oo aan kuu sharaxo. Hayso dalab ...
Xantu waxay dhigeysaa soo bandhigida taxanaha Apple Watch 3 bisha Sebtember
Waxaan aragnay in yar oo war wanaagsan oo la xiriira Apple maalmahan waana tan ka dib markii aan ka hadlaynay ...
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee barnaamijka Pebble ayaa u oggolaan doonta aaladaha inay si aan xad lahayn u sii shaqeeyaan
Ragga ku jira Pebble waxay sii daayeen waxa noqon doona casriyeyntii ugu dambeysay ee barnaamijka Pebble, labada iOS iyo Android.
Apple Watch soo socota ayaa la imaan kara LTE
Tani waa wararka xanta ah ama daadinaysa Apple Watch cusub ee Apple ay diyaarin karto sida uu qabo falanqeeyaha Christopher ...
Samsung S3 Classic wuxuu horey u haystaa nooca LTE
Samsung ayaa ku soo bandhigtay Baseworld S3 Classic LTE, oo ah nooc kaliya lahaa Wi-Fi
Misfit wuxuu kaloo tilmaamayaa moodada smarwatch-ka ee wata 'Android Wear'
Shirkadda Misfit ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay smartwatch-keedii ugu horreeyay oo ay la samaysay Android Wear, Misfit Vapor
Casio's smartwatch cusub ee wata 'Android Wear' wuxuu noqon doonaa daabacaad xadidan
Shirkadda Casio ee Casio ayaa hadda soo bandhigtay Pro Trek Smart WSD-F20s, oo ah smartwatch aad ugu eg qaabkii ay ku soo bandhigtay CES, laakiin leh sapphire crystal
Sameeyaha saacadaha raaxada leh ee Gc ayaa sidoo kale bilaabi doona aaladda casriga ah ee loo yaqaan 'Android Wear smartwatch'
Soo saaraha ugu dambeeyay ee go'aansaday inuu galo suuqa casriga ee smartwatch waa GC, kaasoo bilaabi doona nooc cusub dhamaadka sanadka.
Sawirada ZTE Quarz, oo ah nooca loo yaqaan China Wear ee Android Wear, waa la dusiyay
ZTE Quartz waa midka la doortay isla markaana sawiradii ugu horreeyay ee smartwatch-kaan lagu soo duubay khadka tooska ah ee internetka oo u muuqda inaysan lahayn tiknoolajiyad cusub.
Guess sidoo kale wuxuu tilmaamayaa moodada smartwatches ee leh Wear Android
Shirkadda moodada 'Guess' ayaa hadda ku dhawaaqday in sanadka oo dhan ay bilaabi doonto nooc cusub oo smartwatch ah oo loo yaqaan 'Guess Connected'
Ka ciyaarida Jaalaha Pokémon ee Apple Watch waa wax aan macquul aheyn
Apple Watch waa xulaf weyn, laakiin ... maxaa dhacaya haddii aad rabto inaad ku ciyaarto Yellow Pokémon?
Huawei Watch wuxuu bilaabaa inuu helo Android Wear 2.0
Huawei's smartwatch-kii ugu horreeyay, Huawei Watch, ayaa hadda bilaabay helitaanka Android Wear 2.0, laakiin ma noqon doono kan keliya ee hela iyada bilaha soo socda.
Montblanc waxay ku biirtay moodooyinka noocyada raaxada si ay u bilaabaan saacadaha casriga ah
Shirkadda Montblanc waxay soo bandhigtay smartwatch-keedii ugu horreeyay, Montblanc Summit, aalad suuqa soo gali doonta laga bilaabo $ 890.
Shirkada Swiss watch firm Swatch waxay dooneysaa nidaam u gaar ah oo ay ku shaqeyso smartwatches-keeda
Soosaaraha Swiss soosaaraha Swatch wuxuu ku shaqeynayaa nidaamkiisa hawlgalka ee loogu talagalay mustaqbalkiisa casriga ah
Fosil wuxuu bilaabaa inuu cusbooneysiiyo cusbooneysiinta smartwatches-ka illaa Android 2.0
Soo saaraha Fossil ayaa hadda ku shaaciyey Twitter soo dejinta cusboonaysiinta Android Wear 2.0 ee dhammaan qalabka la jaan qaada.
Kani waa TAG Heuer ku xiran, smartwatch cusub oo raaxo leh oo ka socda shirkadda Switzerland
Wax yar ka hor bil ka hor, shirkadda fadhigeedu yahay Swiss-ka ee raaxada ee TAG Heuer ayaa ku dhawaaqday inay ka shaqeyneyso ...
Jiilka labaad ee TAG Heuer Connected, ayaa la bilaabay Maarso 14
Calaamadda daawashada Swiss ee TAG Heuer ayaa si rasmi ah u shaacisay daah-furka jiilka labaad ee Tag Heuer Connected
Movado, Hugo Boss iyo Tommy Hilfiger si ay u daahfuraan smartwatches oo ay wataan Android Wear 2.0
Maaddaama xiisaha soo saarayaasha qaar ee smartwatches ay hoos u dhacayaan oo ay ka tagayaan soo saaridda aaladaha noocan ah, ...
Fosil waxay cusbooneysiin doontaa qalabkeeda Android Wear 2.0 bisha Maarso
Shirkada daawashada sameysa ee Fossil ayaa ku shaacisay barteeda Twitterka in cusbooneysiinta qalabkeeda ee loo yaqaan 'Android Wear 2.0' ay noqon doonto bishan
Asus Zenwatch 2 iyo 3 ayaa heli doona Android Wear 2.0 bisha Abriil
Cusboonaysiinta 'Android Wear 2.0' ee Asus Zenwatch 2 iyo 3 waxay imaan doontaa bisha Abriil, ku dhowaad sanad kadib markii lagu soo bandhigo beta.
Qalabyada caafimaadka ee ay leedahay ee loo yaqaanno Nokia
Qalabka loo yaqaan'ingsings devices ', oo ah shirkad haatan ku jirta gacanta Nokia, ayaa loo bixin doonaa Nokia bisha Juun ee sannadkan.
Haysashada Huawei P10 hadda oo hel Huawei Watch 2 hadiyad ahaan
Tani waa mid ka mid ah dallacaadahaas oo aadan seegi karin haddii aad ka mid tahay kuwa ka fekeraya inay iibsadaan ...
Huawei Watch 2, ikhtiyaar cusub oo xiiso leh suuqa smartwatch
Huawei maanta waxay soo bandhigtay Huawei Watch 2 cusub, oo ah ikhtiyaar cusub oo xiiso leh suuqa smartwatch.
Huawei Watch 2 waxaa lagu arkaa dhowr sawir oo xaday
Huawei Watch 2 ayaa si rasmi ah loogu soo bandhigi doonaa MWC laakiin waxaan horeyba ugu aragnay aaladda cusub dhowr sawir oo xaday.
Sony Smartwatch 3 isticmaalayaashu waxay rabaan Sony iyo Google inay cusboonaysiiyaan aaladaha Android Wear 2.0
Isticmaalayaasha Sony Smartwatch 3 waxay bilaabeen codsi rasmi ah oo ku saabsan change.org si ay ugu qanciyaan Google iyo Sony inay u cusbooneysiiyaan Android 2.0
Huawei wuxuu soo bandhigi doonaa Huawei Watch 2 at MWC
Shirkadda Shiinaha ee Huawei ayaa hadda xaqiijisay inay si rasmi ah u soo bandhigi doonto Huawei Watch 2, oo ah nooca labaad ee smartwatch-kiisii ​​hore.
Lenovo ma soo saari doonto nooc cusub oo ah Moto 360 sannadkan
Shaki la'aan waxaa jira wax badan oo lagu arko natiijooyinka shirkadaha iyo iibka ay heleen saacadaha casriga ah…
Telegram ayaa hada la heli karaa si loogu rakibo Android Wear 2.0
Tani waa mid ka mid ah codsiyada ugu horreeya ee helitaanka helitaanka nidaamka cusub ee hawlgalka Android Wear ee la bilaabay Arbacadii la soo dhaafay, ...
LG Watch Style iyo LG Watch Sport hadda waa rasmi
Waana in la shaaciyey waqti dheer iyo dhowr saacadood ka hor waxaan dhihi karnaa LG Watch ...
Daahfurka Android Wear 2.0 ayaa hal maalin hore ah: Febraayo 8
8da Febraayo, Google ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta Android Wear 2.0, oo ah nuqulkeedii ugu dambeeyay, maalin ka hor taariikhda la sheegay in la qorsheeyay.
Haddii aad leedahay Samsung Gear S3, ha ka qaadin lacag la'aan adiga oo aan lahayn xeedho asal ah
Waxay umuuqataa inaan dhibaatooyin ku qabno xeedho aan asal ahayn waana taas, inkasta oo ay ...
Tani waxay noqon kartaa LG's ee soo socda Android Wear smartwatch
LG Watch Style waa mid ka mid ah labada smartwatches ee cusub ee ku xiran ee LG ay soo bandhigi doonto bisha Febraayo 9 iyada oo loo raacayo Android Wear 2.0
Google wuxuu soosaarayaa beta cusub ee Android Wear 2.0 oo loogu talagalay kuwa horumariya
Ragga Google waxay hadda sii daayeen beta-kii shanaad ee Android Wear 2.0, beta waa inuu noqdaa kii ugu dambeeyay kahor nooca ugu dambeeya ee loo qorsheeyay Febraayo 9
LG Watch Sport iyo Style cusub ayaa la arkaa waqti kahor, sidoo kale waxay muujinayaan astaamaha ugu muhiimsan
LG horeyba waxay uheshay laba smartwatches cusub oo la diyaariyay, LG Watch Style iyo Sport, oo la isku dayo in aan lumin joogitaanka suuqaan.
3 sawir oo cusub oo smartwatch HTC ah ayaa xaday
Laga soo bilaabo Taiwan, seddex sawir oo cusub oo ah barnaamijka casriga ah ee loo yaqaan 'smart smartwatch', moodal aan ka hadlaynay in ka badan sanad, ayaa mar kale la sifeeyay.
Sida laga soo xigtay Evan Blass Android Wear 2.0 waxaa la sii deyn doonaa Febraayo 9
Taariikhda la filayo in la sii daayo nooca ugu dambeeya ee Android Wear waa Febraayo 9 sida uu qabo Evan Blass
LG Watch Style iyo LG Watch Sport, oo ah laba saacadood oo cusub oo ay soo saartay shirkadda LG ee Google
Waxay u muuqataa in bisha Febraayo ee soo socota 9, marka lagu daro aragtida cusub ee Android Wear 2.0, Google wuxuu leeyahay xoogaa saacado ah oo diyaar ah ...
Android Wear 2.0 ayaa imanaya smartwatches socon kara bisha Febraayo
Google I / O kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa taariikhda ay xusheen shirkadda weyn ee raadinta si loo soo bandhigo waxa noqon lahaa ...
Samsung waxay ka bilaabaysaa arjiga App Store si ay u maamusho Gear S2, Gear S3 iyo Gear Fit oo ka socda iPhone
Shirkadda Kuuriyaanka ah ee Samsung ayaa hadda bilowday codsi rasmi ah oo ku saabsan App Store kaas oo noo oggolaanaya inaan ka maamulno Gear S-ka iPhone-ka
Nooca quraafaadka ah ee Casio, wuxuu soo bandhigayaa smartwatch-kiisii ​​labaad
Jiilka labaad ee Casio smartwatch waa Casio WSD-F20, oo ah aalad leh astaamo ka sarreeya heerarka milatari
Tani waa liiska smartwatches ee heli doona Android Wear 2.0 sanadka 2017
Google waxay horey u diyaarisay Android Wear 2.0 oo suuqa soo gali doona sanadka 2017, waana tan liiska smartwatches ee la cusbooneysiin doono.
Google ayaa si rasmi ah u soo bandhigi doonta laba smartwatches oo ay weheliso Android Wear 2017 rubuca koowaad ee 2.0
Google wuxuu diyaarinayaa soo saarista laba smartwatches cusub rubuca hore ee 2017 waxaana ka muuqan doona Android Wear 2.0.
Spotify hadda waxaa laga xakamayn karaa Samsung Gear S2 iyo S3
Shirkada iswiidhishka ah ee Spotify ayaa hada cusbooneysiisay barnaamijkeeda si looga xakameeyo Samsung Samsung Gear S2 iyo S3
Pebble wuxuu sii wadi doonaa inuu caawiyo qalabkiisa sanadka soo socda
Shirkadda Pebble, oo lagu dari doono Fitbit ka dib iibkeeda, ayaa sheegtay in adeegyadeeda ay sii wadi doonaan inay shaqeeyaan sanadka soo socda
Falanqeynta afaraad ee Android Wear 2.0 Developer ayaa hadda la heli karaa
In kasta oo iibinta dharka la xiran karo ay wali ku jiraan saacado hoose oo kaliya Apple Watch iyo Samsung ...
Apple wuxuu soo saaray laba ogeysiis cusub oo Apple Watch ah
Shirkadda Cupertino ee fadhigeedu yahay ayaa hadda laba xayeysiis oo cusub soo gelisay kanaalka ay ku leedahay Apple Watch UK YouTube.
Google waxay iibsataa Cronologics si loo soo nooleeyo Wear Android
Shirkadda Mountain View ku saleysan ayaa kaliya ku dhawaaqday iibsashada shirkadda Cronologics si loo ballaariyo awoodaha Android Wear
Waa rasmi hadda. Pebble wuxuu macsalaameynayaa macaamiishiisa Twitterka
Toddobaadkii la soo dhaafay iibinta Pebble ee Fitbit ayaa lagu dhawaaqay oo saaxiibkeen Ignacio Sala wuxuu noqday ...
Fitbit weli waa boqorka suuqa la gashado
Fitbit, hal rubuc dheeraad ah, wali waa boqorka iibka dharka, oo ay ku xigaan Xiaomi iyo Garmin.
Samsung Gear S2 waxaa lagu cusbooneysiiyay qaar ka mid ah astaamaha Gear S3
Waxay u muuqataa in ragga Samsung ay doonayaan inay si fiican wax u qabtaan oo aysan bilaabin inay joojiyaan taageerada.
Dhagax dixeed ma adkeysan karo jiidashada suuqa waxaana iibsaday shirkadda Fitbit
Shirkadda Fitbit waxay iibsanaysaa halyeeyga Pebble, shirkaddii ugu horreysay ee soo bandhigta saacadda casriga ee suuqa, laakiin aan awoodin inay la qabsato baahiyaha cusub
Hadda waxaad ku keydin kartaa Samsung Gear S3 gudaha Spain
Jiilka cusub ee Galaxy Gear S3 ayaa hadda loo heli karaa boos celin Spain.
Tani waa sida Nokia Moonraker smartwatch u muuqday, mashruucii la joojiyay
Daawo video-gan oo bogaadi sida uu u shaqeynayay Nokia Moonraker, smartwatch-ka uu noqon karo iyo inuusan ahaan jirin.
5 tilmaam si aad u daryeesho smartwatch-kaaga oo markaa aad u dheereyso noloshiisa waxtarka leh
Maanta waxaan kuugu sheegeynaa maqaalkan 5 talooyin oo ah kuwa ugu faa'iidada badan ee lagu daryeelo smartwatch-kaaga oo markaa ku dheereynaya nolosheeda waxtarka leh curcurka.
AT&T wuxuu furayaa Samsung Gear S3 pre-order maanta
Hawl wadeenku wuxuu ka hor mari doonaa inta kale bilawga boos celin ama horay u soo iibsiga saacadda casriga ee shirkadda ...
Iibinta saacadaha casriga ah ayaa sii socda hoos u dhac
Waa run inaan ku jirno waqti adag xagga iibinta saacadaha casriga ah iyo in tooda ...
Sida lagu sheegay daraasadii ugu dambeysay, Apple Watch waa aaladda ugu saxsan
Apple Watch wuxuu cadeeyay inuu leeyahay dareemaha wadnaha ee saxda ah ee ka mid ah aaladaha la gashado ee suuqa ku jira.
Polar M200, saacad kale oo ku takhasustay orodka
Waxaan kuu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Polar M200, saacadda cusub ee Polar waxay diiradda saartay orodka.
Video lagu arkay Apple Watch oo biyaha ceyrinaya
Cusbooneysiinta Apple smartwatch, Apple Watch Series 2, waxay ku dareysaa ka hortag biyo iyo sida ...
Tizen ee soo socota ee Huawei Watch?
Runtu waxay tahay in sanadkaan aynaan haynin warka ugu muhiimsan ama heer sare ah ee saacadaha casriga ah ee keena ...
Cowatch, smartwatch oo ka koobnaan doona Alexa
CoWatch waa smartwatch ka socda shirkadda IMCO oo lagu garto haysashada Alexa oo ah kaaliye dalxiis ku dhex jira smartwatch ...
iFixit wuxuu xaqiijinayaa in batteriga Apple Watch cusub uu leeyahay awood aad u weyn
Ragga ka socda iFixit waxay dhisteen Apple Watch Series 2 oo xaqiijinaya in batteriga qalabkan uu ka awood badan yahay qaabkii hore
Kuwani waa faraqa u dhexeeya Apple Watch Series 2 iyo Apple Watch Series 1
Tartanka Apple Watch Series 2 durba wuu socdaa suuqa maantana waxaan barbar dhigeynaa Apple Watch Series 1 oo horey suuqa ugu jiray.
Apple wuxuu soo bandhigayaa jiilka labaad ee Apple Watch
Jiilka labaad ee Apple Watch waxaa baabtiisay Apple as Series 2 waxayna noo siineysaa cibaaro ugu weyn GPS iyo iska caabin biyo
Samsung Gear S3 ayaa qiimahiisu noqonayaa 399 euro wuxuuna la jaan qaadayaa iPhone
Kaliya 24 saacadood ka dib soo bandhigideeda waxaan horey u ogaanay qiimaha Samsung Gear S3 cusub iyo waliba inay la jaan qaadayaan iPhone-ka.
Google waxay hoos u dhigeysaa qiimaha Huawei Watch 100 euro dukaankeeda Google
Huawei Watch waa mid ka mid ah smartwatches ugu fiican suuqa hadana Google waxay hoos u dhigtay qiimaheeda 100 euro ee Google Store.
Astaamaha, helitaanka iyo wararka Samsung Galaxy Gear S3
Kuwani waa astaamaha, qiimaha iyo wararka Samsung Galaxy Gear S3, saacadda cusub ee Samsung lagu soo bandhigay IFA 2016.
Samsung Gear S3 waxaa la arkaa wax yar ka hor soo bandhigidiisa
Samsung Gear S3 ayaa lagu arkay dhowr sawir oo sir ah waxyar ka hor soo bandhigidiisa oo maanta dhici doonta.
Huami Amazfit Smartwatch, Xiaomi wearable ah oo aan ka iman Xiaomi
Imaatinka saacad caqli gal ah oo ay leedahay Xiaomi ayaa in badan la isla dhexmaraayey galabnimadiina waxaan ...
Sony waxay ka dhigeysaa FES Watch U mid rasmi ah laba muuqaal oo e-khad ah
Sony waxay si rasmi ah u soo bandhigtay FES Watch U cusub oo aad jacayl ku qaadi doontid mahadnaqa labadeeda shaashad ee khad elektaroonig ah.
Nike waxay umuuqataa inay xaqiijisay imaatinka GPS-ka Apple Watch 2
Kuwo badan ayaa ah xariirrada maanta ka hadlaya wararka aan dooneyno inaan maanta idin tusno. Waxay umuuqataa inaan ogahay ...
Meizu Mix, Meizu smartwatch kii ugu horreeyay ayaa hadda rasmi ah
Meizu Mix waa Meizu smartwatch cusub oo si rasmi ah loo soo bandhigay inkasta oo qalabkani aanu ahayn wixii laga filayay smartwatch ...
Waa rasmi hadda; Samsung Gear S3 waxaa la soo bandhigi doonaa Ogosto 31
Waxaan horeyba u aragnay faahfaahin badan oo ku saabsan Samsung Gear S3 cusub, laakiin daqiiqado yar ayaan horeyba u ognahay maalinta ay soo bandhigista rasmiga ah.
Xiaomi waxay diyaarineysaa soo bandhigida saacadeeda casriga ah oo qiimo ka hooseeya 135 euro ah
Waxay umuuqataa in Xiaomi ay aakhirka bilaabi doonto smartwatch suuqa, kaas oo sida laga soo xigtay falanqeeye caan ah oo Shiine ah uu ku kacayo wax ka yar 135 euro.
Apple Watch 2 wuxuu ilaalin doonaa naqshadiisa, wuxuu ku darayaa GPS wuxuuna na siinayaa madax-bannaani weyn
Apple waxay soo bandhigi kartaa Apple Watch 2 si dhakhso leh, taas oo ilaalin doonta naqshadeeda asalka ah, in kasta oo ay na siin doonto GPS ka fiican iyo bateri weyn.
Samsung Gear S3 cusub ayaa la soo bandhigi doonaa bisha Sebtember 1 sida ku xusan xogaha
Samunsg waxay diyaar u tahay Gear S3 inay u diyaar garowdo soo bandhigideeda rasmiga ah, sida ku cad xogtan waxay dhici kartaa bisha soo socota ee Sebtember 1.
Zeblaze Cosmo, smartwatch awood badan, qurux badan oo leh qiime macquul ah
Waxaan tijaabinay Zeblaze Cosmo, smartwatch leh naqshad xiiso leh iyo qeexitaanno, iyo sidoo kale qiimo aad u wanaagsan.
Ma u baahanahay inaan iibsado saacadda casriga ah?
In kasta oo go'aanka lagu iibsanayo smartwatch adigaa iska leh, waxaan kaa caawin doonnaa inaad ogaato faa'iidooyinka haysashada smartwatch marwalba curcurkaaga
Samsung Gear S2 wuxuu hadda la jaan qaadayaa macruufka
Waxay ahayd inaan sugno in cabaar ah laakiin ugu dambeyn Samsung Gear S2 horeyba wuxuu ula jaan qaadayay macruufka ama wixii lamid ah aaladaha Apple.
Huawei Watch, smartwatch aad u fiican dhinac kasta
Huawei Watch waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee daawadayaasha suuqa, maantana waxaan ku lafagureynaa si faahfaahsan qormadan xiisaha badan.
Furayaasha iyo tabaha lagu iibsado smartwatch qumman adiga
Miyaad ka fikireysaa inaad iibsato smartwatch? Qodobkaan waxaan ku tusineynaa furayaal iyo tilmaamo aad ku iibsaneyso saxda.
7 smartwatches si aad u siiso ama aad naftaada u siiso Christmas-ka
Miyaad ka fikireysaa inaad wax siiso ama aad naftaada u siiso smartwatch kan Kirismaska? Liiskan waxaan kuugu soo bandhigeynaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa.
10 tilmaam si loo badbaadiyo nolosha batteriga ee Apple Watch-kaaga
Dhibaatooyin ma ku haysaa batteriga Apple Watch-kaaga? Maqaalkan waxaan ku tusineynaa 10 talooyin oo aad ku keydin karto batteriga isla markaana aad ku dheereyn karto madax-bannaanida qalabka.
Kuwani waa kuwa ugu fiican ee smartwatches leh Android Wear
Smartwatches ayaa halkan u jooga inay ku sii jiraan curcuradeenna oo kuwani waa kuwa ugu fiican Android Wear smartwatches.
Waqtiga Dhagax-jabka: Tani waa waxa kaliya ee aad uga baahan tahay inaad ka ogaato smartwatch-ka cusub
Pebble ayaa soo bandhigay galab cusub oo casri ah waxaanan kuu sheegi doonaa warkiisa oo dhan.
Waxaan tijaabinay oo aan falanqeynay Motorola Moto 360
Qodobka aan ku tijaabino kuna falanqeyno si faahfaahsan Motorola Moto 360 smartwatch, mid ka mid ah kuwa ugu caansan suuqa.
Waxaan tijaabinay saacadda TomTom Runner Cardio
Falanqaynta daawashada cayaaraha TomTom Runner Cardio oo leh kormeer garaaca wadnaha oo isku dhafan, GPS iyo xulashooyinka tababarka ee loogu talagalay kuwa ugu baahida badan.
Sida loo waafajiyo jadwalkaaga taariikhda loo yaqaan 'Android Wear'
Android Wear waa nidaam qalliin smartwatch ah oo qumman, laakiin isku-darka xogta waxay noqon kartaa dhibaato. Maanta waxaan ku baranay sida loo sameeyo ajandahaaga.